Hatsaraina ny fiompiana sy ny fanondranana ny henam-biby eto amin’ny faritra Boeny. | Région Boeny
Atrikasa ho fanatsarana ny fiompiana sy ny fanondranana ny henam-biby ary ho fanamafisana ny fahaiza-manao amin’ny fiarovana ny fahasalaman’ny biby no notanterahina tao amin’ny Trano fandraisambahiny na ny Hotel du Phare la Corniche Mahajanga, ny zoma 24 sy sabotsy 25 febroary 2017.
Nandray anjara tamin’izao atrikasa izao ny foibem-paritry ny Varotra sy ny Fanjifana, ny foibem-paritry Fambolena sy ny Fiompiana ary ny fivondronan’ny mpanondrana harena an-dranomasina. Ny tetikasa Santatra izay mahazo famatsiam-bola avy amin’ny vondrona Europeanina no tompon’andraikitra nahatontosana izao atrikasa izao.
Nandritra io roa andro io dia nisy ny fanamasina ny fahafantaran’ireo mpizaika ny lalàna mifehy ny kalitaon-tsakafo, ny aretina mifindra mpahazo ny biby ary ireo aretina mpahazo ny biby nefa kosa ahina hifindra amin’ny olombelona.
Aorian’izao atrikasa izao dia hisy ny fizarana solosaina miisa 50 ho an’ireo mpizaika mba hanamorana ny asan’izy ireo eto anivon’ny faritra Boeny sy ahazoan’izy ireo tombotsoa amin’ity sehatry ny fiompiana biby sy fanondranana azy ity.
Tonga nanatrika sy nanokatra tamin’ny fomba ofisialy an’izao atrik’asa izao ny solotenan’ny Préfet an’i Mahajanga, ny solotenan’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, ny Talem-paritry ny Varotra sy ny Fanjifana eto Boeny ary ny solotenan’ny Talem-paritry ny Fambolena sy ny Fiompiana avy eto aminy faritra.